Yan Aung: MMBloggersHelpdesk နှင့် ဘလော့ဂ်များ၏ ရှေ့ရေး…
ပိုင်အိုးနီးယားကြီး တစ်ယောက်က ဒီလိုမျိုးပြောထွက်မယ် မထင်ခဲ့ဘူး။ ပြည်တွင်းမှာမို့ အပြောအဆို ဆင်ချင်ရတယ်ဆိုလဲ ဘာမှမပြောနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်သူဘလော့ဂ်လုပ်တာကို အားကျလို့ လိုက်လုပ်ခဲ့တာ။ အထင်ကြီးခဲ့တာ အလကားဘဲ။ စိတ်ပျက်တယ်။
မိုက်တယ်ကွာရေးထားတာ။ အားမာန်အပြည့်ပဲ။ ကိုရန်အောင်ရေ ဒီ့ထက်ပိုအောင်မြင်ပါစေ။
ကိုရန်အောင်ခင်ဗျာ....ကိုရန်အောင်ရဲ့ စိတ်ထား၊သဘောထားနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို
ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း helpdesk မှာပါဝင်ရေးသားချင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ရဲ့ အဆင့်ကကိုရန်အောင်ဘလော့လောကကိုစ၀င်တုန်းကပုံစံမျိုး
ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားပြီးဝင်ပါလို့ ရလောက်တဲ့ပို့ စ်တွေရေးသားဖြစ်ရင်တော့မေးလ်ကနေတဆင့်ပို့ ပေးပါရစေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မမေလည်း အချိန်မရလို့ ဘလော့တွေကို သိပ်မဖတ်ဖြစ်တာနဲ့ ဘလော့လောကကြီး ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိပ်မသိဘူး။ ကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် စာရေးဖို့တောင် အနိုင်နိုင် ဖြစ်နေတာလေ။ မမေတော့ ကိုရန်လေးကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ ကိုရန်လေး ပြောတဲ့ နေရာမှာ သွားရိုက်တာ စက်ထဲမှာ ဖောင့်မရှိလည်း စာရိုက်လို့ ရသွားပြီ။
တခုပဲ … တချို့ဘလော့တွေ ဖတ်လို့ မရသေးဘူး။ ကွန်မန့်တွေမှာလည်း အကွက်တွေ မြင်နေရတုန်းပဲ။
မမေလည်း ‘မြန်မာဘလော့ခ်များ၏ အနာဂတ်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်’ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာတုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတယ်။
ကလောင်သွားဟာ ဓားသွားထက် ထက်တာမို့ ဟိုပိတ် ဒီပိတ် လိုက်လုပ်နေရတယ် ဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲ။ မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ မီဒီယာတိုက်ပွဲ ဆက်လက် အဓွန့်ရှည်ပြီး အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ကိုရန် မင်္ဂလာပါ။ နေကောင်းလား။ Helpdeskက ကျွန်တော်တို့လို blogger ပေါက်စတွေအတွက် အရမ်းကို အကျိုးပြုတယ်ဗျ။ မီဒီယာတိုက်ပွဲကြီး က အောင်မြင်ပါစေ...
ကိုရန်ရေ စာမွဲအရင်လကရှိနေတော့ help desk မှာ ဘာမှမတင်နိုင်သေဘူး အခုတော့ အားပါပြီ အကျိုးရှိမယ့်ပို့တွေ တွေ့ရင်တင်ပါ့မယ်
ကျွန်တော်တော့ ကျောင်းမှာ Internet and Ecomerce ယူထားပေမယ့် HTML နဲ့ CSS မှာ ကကြီးခကွေး ကနေမတက်သေးလို့Help desk မှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ အရည်အချင်းမမီသေးဘူးဗျို့ ။ တဖြည်းဖြည်းလေ့လာရင်းနဲ့ ပါဝင်ပါ့မယ်ဗျာ။
ဘယ်အလုပ်မဆို Organized ဖြစ်ခြင်းဟာ အချိန်ကုန်လည်း သက်သာတယ်. အောင်မြင်မှုနဲ့လည်း ပိုနီးတယ် ဆိုတာ
I agree it absolutely.
ဂွတ်နေတာပဲ ဒူးသာဒူးလေ ရန်ရန်ရေ
အော် ဘလော့ဂါ အကွဲအပြဲထဲ ကိုရန်အောင် ခုန်ဆင်းလာပြီကိုး
ကိုရန်အောင်ပြောထားတာတွေက အကျိုးအကြောင်း ပြေပြစ်ဆီလျော်ကောင်းမွန်ပါတယ် ။ ဒီပို့စ်အတွက် ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါပဲ ။ ကျေးဇူး :)